Ku xigeenka madaxa xiriirka kubadda cagta ee dalka Brazil oo dabka ku sii shiday Neymar Jr kahor tartanka Copa America – Gool FM
RASMI: Xiriirka UEFA oo ku dhawaaqay goolasha u sharraxan goolkii ugu quruxda badnaa isbuucaan Champions League
Keylor Navas oo daaha ka qaaday dareenkiisa layaabka leh, kaddib kulankiisii ugu horeeyay uu ka hor yimid saaxiibadiis hore ee Real Madrid
Kooxda Chelsea oo heshiis cusub ku abaal-marinaysa Weeraryahanka u soo baxay ee Tammy Abraham
RASMI: UEFA oo ku dhawaaqday liiska musharaxiinta abaalmarinta xidigii ugu fiicnaa kulamadii furitaanka Champions League ee toddobaadkan
Muxuu ka yiri Zidane, kaddib guuldaradii niyadjabka aheyd ay kala kulmeen kooxda Paris Saint-Germain??
Guud ahaan kulammada caawa la ciyaari doono ee heerka Guruubyada Europa League & Saacadaha ay soo geli doonaan
Ku xigeenka madaxa xiriirka kubadda cagta ee dalka Brazil oo dabka ku sii shiday Neymar Jr kahor tartanka Copa America
Dajiye June 5, 2019
(Ameerika) 05 Juunyo 2019. Waxay u muuqataa in xaalada ay ku adkaan doonto xiddiga reer Brazil iyo kooxda PSG ee Neymar Jr, kaddib markii lagu eedeeyay inuu kufsaday gabar uu ka bartay baraha bulshada gaar ahaan Instagram-ka.
Waxay sheekada sii xumaatay, kaddib markii uu ku xigeenka madaxa xiriirka kubadda cagta dalka Brazil ee Francisco Noveletto uu si cad u sheegay arin ku saabsan baahida loo qabo in lagu dhawaaqo in Neymar Jr uusan kala qeyb gali doonin xulkiisa Samba tartanka Copa America.
Tartanka Copa America ayaa la filayaa inuu bilowdo 15-ka bisha June, iyadoo Brazil ay sannadkan martigelin doonto tartankan.
Taageerayaasha xulka qaranka Brazil ayaa waxay rajeenayaan inay ku guuleystaan sanadkan tartanka Copa America, gaar ahaan maadaama lagu qabanayo gudaha Samba.
Balse kaddib fadeexadii Neymar Jr ee dhawaantan, ciyaaryahanka kooxda PSG ayaa suurtagal ah inuu ka maqnaan doono tartanka Copa America, maadaama laga cabsi qabo inuu dariinkiisa oo dhan uu u weeciyo xaalada kiiskan cusub ee lagu soo oogay.
Laakiin Neymar Jr oo haatan ku sugan xerada tababarka ee xulka qaranka Brazil ay ugu diyaar garoobayaan Copa América 2019, kaasoo lab isbuuc ka dib ka furmi doono dalkiisa hooyo ee Brazil ayaan ka laba labeynin inuu beeninyo eedeymaha ku aadan kiiska kufsiga ah ee loo soo jeediyay.
Hadaba ku xigeenka madaxa xiriirka kubadda cagta dalka Brazil ee Francisco Noveletto ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “AS” ee dalka Spain wuxuu ku sheegay:
“Waxaa jira fiidiyow cusub oo ku saabsan Neymar Jr kaasoo goordhow tasoo bandhigi doono, kuna qasbi karta ciyaaryahanka inuu ku fikiro inuusan ciyaarin tartanka Copa America”.
“Haddii uu Neymar go’aansado inuu ka qeyb qaato Copa America, Brazil waxay arintaas ku yeelan doontaa saameyn, sababtoo ah ma noqon doono 100% diyaar”.
Maxamed Saalax oo fariin u diray warbaahinta qaar iyo taageerayaashiisa
RASMI: Kooxda Bayern Munich oo ku dhawaaqday inuu ka tagayo James Rodríguez